Asalka iyo quraafaadka Griigga ee Ixion iyo qorraxda qorraxda ee 22º | Saadaasha Shabakadda
Waqtiyadii hore, waxaa jiray dadyow badan oo isku dayay inay sharxaan qaar ka mid ah ifafaalaha dabiiciga ah ee layaabka leh iyo qaar ka mid ah dhacdooyinka saadaasha hawada. Tan awgeed, wuxuu siiyay sharaxaadda in sababta asalka u ah saadaasha hawadan iyo dabiiciga ay ahayd ficilada qaar ka mid ah ilaahyada quraafaadka ah. Ilaahyadan waxay ku dhaqmaan dhulka dadka iyagoo ujeedkoodu qaar yahay. Khabiir Talyaani ah ayaa mas'uul ka ah sharaxaadda 22º halo ee quraafaadka Griiga. Khabiirka reer Talyaani ee daahfuray waxaa lagu magacaabaa Paolo Coloma waxaana loo yaqaanaa Ixion.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan sifooyinka iyo asalka quraafaadka Ixion.
1 Yuu ahaa Ixion?
2 Khuraafaadka Ixion iyo halo
3 Sidee halo qoraxda loo sameeyaa
Yuu ahaa Ixion?
Ixion wuxuu ahaa boqor quraafaad ah oo Thessaly ah oo sumcad ku lahaa boqor xun. Ma ahayn oo kaliya boqor xun, laakiin sidoo kale wuxuu ahaa qof xun. Wuxuu guursaday Dia oo ahayd gabadhii Eioneus, laakiin bixinta hadiyadii loogu balan qaaday ciida cusub waa la iska indhatiray. Waqtigaas, caado ayaa jirtay oo waxay ahayd in hadiyado la siiyo sodohdii intii lagu jiray arooska. Xaqiiqda ah in Ixion uusan bixin soddohdiisa intii lagu guda jiray arooska ayaa dhalisay dagaal. Natiijada dagaalka ayaa ku dhamaatay Ixion oo Eioneus ku tuuraya god dhuxusha ka shidan qoryo.
Iyada oo ay la soo gudboonaatay xaqiiqdaas, midkoodna goballada Griigga ahi diyaar uma aha inay cafiyaan dambiga Ixion Ugu dambeyntiina, Ilaaha Zeus laftiisa waa loo naxariistay oo wuxuu ku casuumay Mount Olympus inuu isdaahiriyo. Dambiga kuma filneyn xumaanta Ixion haysto. Markuu ku sugnaa Olympus, oo ah meeshii ilaahyada Griigga, wuxuu abaal mariyey deeqsinimada Zeus isku daygiisii ​​midowgii xaaskiisa Hera. Maaddaama Zeus uu aad u caqli badnaa, wuxuu awooday inuu qiyaaso ujeeddooyinka sharka wuxuuna hindisay qorshe. Awoodiisa awoodiisa, wuxuu awooday inuu ku badalo daruur la yiraahdo Nefele oo wuxuu siiyaa muuqaal aad ugu eg Hera.. Xiriirkii midowgii ka dhashay wuxuu soo saaray Centaurus oo ahaa Aabihii Centaurus.
Ciqaabta uu ku mutaystay Zeus Ixion waxay ahayd mid cabsi badan oo waarta. Waana inuu awood u yeeshay inuu ogaado dhammaan ujeeddooyinka xun ee ku wajahan Hera. Zeus wuxuu faray Hermes in loo xilsaro xirxirida Ixion gacmihiisa iyo cagihiisa si loo saaro taayir baal leh si uu u rogrogo weligiis.
Khuraafaadka Ixion iyo halo
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, asalka guud ee khuraafaadka Ixion wuxuu ka yimid nooc dabiici dabiici ah oo aan la sharixi karin. Qaar ka mid ah muuqaalada ifafaalaha dabiiciga sida halo oo ah 22 darajo ayaa caan ka ah Griiga. Xaaladdan oo kale, halo-kani wuxuu dhacaa inta lagu jiro xilliyada roobka, waana wax la yaab leh in asalka quraafaadku ka dhaco. Giriiggii hore waxaa ka jiray khuraafaad sharaxaya asalka dhacdadan.
Marka la eego sheekada aan ka sheegnay sheekooyinka Giriigga ee Ixion uu u muuqdo inuu ciqaabay Zeus laftiisa ayaa asal ahaan ah 22 digrii halo. Waana la sharaxay in Paolo Coloma, khabiir Talyaani ah oo ku takhasusay quraafaadka Giriigga, uu xaqiijinayo in asalka sharraxaadda dhacdadani ay tahay inay Ixion u jeesanayso giraangirta gubanaysa ciqaab ay leedahay Zeus.
Si loo sharraxo xiriirka ugu weyn ee suurtogalka ah ee quraafaadka Griiga, Paolo wuxuu ku doodayaa in halo 22 degree ay raacdo qorraxda oo mararka qaar la arki karo dhowr saacadood. Soohdinta guduudan waxaa loo qaadan karaa inay tahay giraan dab ah.
Dhinaca kale, dhinicii sheekooyinka khuraafaadka 22 halo ayaa sidoo kale lala xiriiriyaa Nefele, daruurtii la beddelay. Goobta midowgii u dhexeeyey Ixion iyo Nephele waxay ku taallay samada maaddaama ay tahay meeshii Zeus iyo Olympus. Dhaqan ka hor sheekadan, waxaa la sheegay in maalinta ciqaabta ka hor iyana baraf ahayd. Lugaha gubanaaya waxaa lagu tilmaamaa inuu cirka u duulayo weligiis.
All quraafaadkani wuxuu kaloo la xiriiraa roobka maaddaama muuqaalka halo-kani uu had iyo goor yahay horudhac wejiyo diiran oo gala roob.
Sidee halo qoraxda loo sameeyaa
Hadda waxaan sharaxaad ka bixin doonnaa sida qorraxda qorraxda ay asal ahaan saynis ahaan ugu timid ee aysan ku imaan sheeko-quraafaadka. Dhacdada waxaa lagu sifeeyaa inay tahay wareeg wareegsan oo qorraxda ku dhacda meelaha qabow. Iyaga ka mid ah, waxay badanaa ka dhacdaa Ruushka, Antarctica, ama waqooyiga Scandinavia. Waxay badanaa dhacdaa marka xaaladaha deegaanku ku habboon yihiin samaysankooda. Sidaa darteed, waxay sidoo kale ka dhici karaan meelo kale. Waxay ka kooban tahay qaybo baraf ah oo ganaax ku jira qaybta ugu sarreysa ee troposphere. Marka iftiinka qoraxda uu ku soo dhaco barafkan, waxay diidaan iftiinka waxayna ka dhigaan muuqaalka guud ee midabada mid muuqda.
Saamaynta laga arkay halo waxay la mid tahay ta qaansoroobaad. Waxaa loogu yeeri karaa qaansoroobaad wareeg ah oo lagu garto inta badan iridescent. Si xaaladda halo ay uga dhacdo meel kale oo dhulka ka mid ah, waxaa loo baahan yahay meelo caadi ahaan heer kulkoodu hooseeyo. Waa inuu jiraa sidoo kale kala duwanaansho sare leh heerkulka dusha sare iyo heerkulka joogga. Sidan oo kale, waxaa jiri kara kristantarro baraf ah oo joogga sare ah oo mas'uul ka ah diidmada iftiinka si halo dhammeystiran loo sameeyo. Meelaha qaarkood heerkulkoodu sarreeyo, dhacdadan lama arki karo ama way gaaban tahay.
Kala duwanaanshaha sare ee jira heerkulka subaxa ayaa ah waxa dhaliya muuqaalka haloskan. Aroortii hawadu way ka qabowsan tahay sidii hore madaama aysan haysan isha kuleylka qorraxda oo dhan. Waa mid ka mid ah sababaha aan u badiyo subaxdii. Shuruud kale ayaa ah nooca daruuraha ee cirka ku jira xilligaas waa daruuro cirruus ah. Waana in daruurahaas ay sameysmayaan kristantiyaal yaryar oo baraf ah kuwaas oo ah waxa ka dhasha hababka milicsiga iyo iftiinka iftiinka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto qorraxda qorraxda iyo khuraafaadka Ixion.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Ixion
Galaxyo aan caadi ahayn